Xinhua Myanmar - ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမ္မတဒူတာတေးက တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမ္မတဒူတာတေးက တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမ္မတဒူတာတေးက မေ ၃ ရက်တွင် မနီလာမြို့တော်၌ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ်ထိုးနှံမှုခံယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ) ASEAN
မနီလာ၊မေ ၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမ္မတဒူတာတေးက မေ ၃ ရက် ညပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ် ထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ကြောင်း သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Harry Roque က ဆိုသည်။
“ ဖိလစ်ပိုင်ငံအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန(FDA)က သမ္မတလုံခြုံရေးအုပ်စု(PSG) ဆေးရုံကို ခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ပထမအကြိမ်ဆေးထိုးနှံမှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ” ဟု Roque ၏ ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Francisco Duque က သမ္မတဒူတာတေး၏ ဘယ်ဘက်လက်မောင်းထဲသို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနေသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ဒူတာတေး၏ ကာလရှည်ကြာ လက်ထောက် နှင့် ဆီးနိုတ်လွှတ်တော်အမတ် တစ်ဦးဖြစ်သူ Christopher Bong Go က လူမှုကွန်ရက်တွင် ထုတ်လွှင့် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းရုပ်သံဖိုင်တွင် ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေသော အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ် ဒူတာတေး၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာမှာ ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်း ကဆိုသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမ္မတဒူတာတေးက မေ ၃ ရက်တွင် မနီလာမြို့တော်၌ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ်ထိုးနှံမှုခံယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဒူတာတေးက COVID-19 ရောဂါမှ ကာကွယ်ရန် ၎င်းအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူများအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ဖိလစ်ပိုင်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနက Sinopharm ကာကွယ်ဆေးကို ဝယ်ရန် နှင့် သုံးစွဲရန် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် PSG အားခွင့်ပြုချက် ပေးခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင်တွင် မေ ၃ ရက်အထိ COVID-19 ရောဂါ အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၁,၀၆၂,၂၂၅ ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၁၇,၅၂၅ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Philippine President Duterte receives China's Sinopharm COVID-19 vaccine
MANILA, May3(Xinhua) -- Philippine President Rodrigo Duterte received his first dose of China's Sinopharm COVID-19 vaccine on Monday night, presidential spokesperson Harry Roque said.
"His first dose was covered by the compassionate use permit issued to the Presidential Security Group (PSG) hospital by the Food and Drug Administration (FDA) (of the Philippines)," Roque said inabrief statement.
Duterte's longtime aide and senator Christopher Bong Go posted on social mediaavideo showing Health Secretary Francisco Duque administering the vaccine in Duterte's left arm. In the video, Duterte, 76, said he was feeling good.
Duterte also said that he was vaccinated to protect his health from COVID-19 and he encouraged the Filipinos also to get vaccinated.
The FDA in February issuedacompassionate use permit to the PSG that allows them to buy and use the Sinopharm vaccine.
The Philippines has reportedatotal of 1,062,225 COVID-19 cases as of Monday, including 17,525 deaths.
Photo caption- Philippine President Rodrigo Duterte receives his first dose of China's Sinopharm COVID-19 vaccine in the Philippines, May 3, 2021
Previous Article အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ ဗီဇပြောင်းလဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်သစ် ကူးစက်ခံရသူ ၃ ဦး တွေ့ရှိ
Next Article စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါ လူနာသစ် ၃၉ ဦး တွေ့ရှိ